China Wedge Anchors umzi-mveliso kunye nababoneleli |Changlan
1. i-ancho ye-wedge Akukho zidingo eziphezulu ze-concrete void ubunzulu kunye nokucoceka, kulula ukuyifaka, kwaye ixabiso alibizi.Khetha ubunzulu obufanelekileyo bokuzinzisa ngokobukhulu bophahla olusisigxina.Ngokunyuka kobunzulu bokuzinzisa, ukunyanzeliswa kuyanda.Le mveliso inokwethenjelwa umsebenzi wokwandisaLe mveliso ineentambo ezinde kwaye kulula ukuyifaka, kwaye isoloko isetyenziswa kwinkonzo yomthwalo onzima.
Ukufumana amandla athembekileyo, amakhulu okuqinisa, kuyafuneka ukuba uqinisekise ukuba ikliphu encanyathiselwe kwi-gecko yandisiwe ngokupheleleyo.Kwaye ikhonkco yekliphu yokwandisa kufuneka ingakhutshelwa kwintonga okanye ijijwe emngxunyeni.
2. Isetyenziswa kwikhonkrithi kunye nelitye lendalo elixineneyo, isakhiwo sensimbi, iphrofayili yensimbi, iplati ephantsi, iplate yokuxhasa, i-bracket, i-railing, ifestile, udonga lwamakhethini, umatshini, i-girder, i-truss, i-bracket kunye nokunye.
Igama wedge iankile
Unyango lomphezulu izinki
Izinto eziphathekayo Intsimbi yekhabhoni, insimbi engenasici
1. Ukuphela kombhobho kwi-tube plate hole ye-carrepair gecko igqitywe ukwenzela ukuba udonga lwangaphakathi lombhobho luqhubeke nokwandisa, okubangela ukuguqulwa kweplastiki,
ububanzi umbhobho ukwanda, intloko umbhobho incamathele ngokupheleleyo kumngxuma ipleyiti ityhubhu, kunye
ipleyiti yetyhubhu inyanzelekile ukuba ivelise i-elastic deformation.Xa i-expander ityhubhu isusiwe, i-elastic deformatio yepleyiti yetyhubhu ifuna ukubuyiselwa kwimeko yayo yangaphambili, kwaye i-plastic deformation ye-tube end ayikwazi.
zibuyiselwe.Isiphumo kukuba ipleyiti ityhubhu ibambe isiphelo ityhubhu ngokuqinileyo, ukuze ufezekise injongo yokutywina akukho kuvuza kunye nokudibanisa ngokuqinileyo zombini.
Izinto eziluncedo zegecko yokulungisa imoto zigxile ikakhulu kule miba ilandelayo:
1. Ukongeza kubunzulu obuqhelekileyo be-anchorage bofakelo, ubungakanani bebholiti ye-ankile nganye bunokusetyenziselwa ubunzulu bokungcwaba obunzulu, obubonelela ukuguquguquka okukhulu ngexesha lofakelo.
2. Umsonto omde, olungele ukufakela uhlobo lwesithuba, kunye nohlengahlengiso oluguquguqukayo
3. Ikhusela umonakalo wentambo xa i-bolt ibhobhoza emngxunyeni, kwaye i-embossing yentloko inika isibonakaliso esicacileyo sobunzulu obufakwe.
Ngaphambili: I-Flat Pad
Okulandelayo: Ibholithi yeankile yekhemikhali
I-DIN 1142 iikliphu zeNtsontelo zoCingo eziMaleable ...